ရပ်ရွာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း - Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
နိမ့်ကျသောပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ရပ်ရွာလူထုမှနားလည်မှုနှင့်နားလည်နိုင်ရန်ပြသနာများကိုအနိမ့်ဝင်ငွေဖြင့်နေထိုင်သူများမြောက်ပိုင်းနှင့်အလယ်အလတ် ILLINOIS မျက်နှာဖုံးများတွင်ပြသခဲ့သည်။
၀ န်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောလူ ဦး ရေအတွက်သီးခြားကိစ္စရပ်များတွင်လုပ်ကိုင်သည်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးမျိုးတွင်ဆက်လက်ရှိနေခြင်းနှင့်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်မှုရရှိသည်၊ ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်လူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှုပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်ပူးပေါင်းသည်။
OUTREACH / ပညာရေး
Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုရထားသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့များအတွက်ကွင်းဆင်းတင်ပြချက်များကိုပေးသည်။ အသိပညာဝန်ထမ်းများရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ ရပ်ရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပြသနာများကိုပြောရန်သင်၏အဖွဲ့ထံမှတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်တင်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်။ မေးရန် သင်၏ဒေသရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ.
Prairie ပြည်နယ်သည် ၀ င်ငွေနည်းသောအသိုင်းအဝိုင်း၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှေ့နေများအား MCLE- ခွင့်ပြုထားသောသင်တန်းကိုပေးသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
လက်နက်ကိုင်တပ်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့်သူတို့၏မိသားစုဝင်များအတွက် ၀ င်ငွေနိမ့်သူများအားတရား ၀ င်အကူအညီများပေးသောအီလီနွိုက်စ်တပ်မတော်ဥပဒေရေးရာအထောက်အကူပြုကွန်ယက် (IL-AFLAN) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ အလည်အပတ် bit.ly/3s0Fljf ဤစိတ်ကူးကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ကွန်ယက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။	... ပိုကြည့်ရှုပါအောက်ကိုကြည့်ပါ